Video:-Madaxweyne Gaas oo si dadban uga hor yimid hadalkii Camey carabaabayna in doorasho dhacayso – Idil News
Video:-Madaxweyne Gaas oo si dadban uga hor yimid hadalkii Camey carabaabayna in doorasho dhacayso
Madaxweynaha Dawlada Puntland oo dalka dib ugu soo laabtay maanta ,ayaa shir jaraa’id oo uu ku qabtay Qasriga madaxtooyada waxuu kaga hadlay arimo dhawr ah.
Madaxweyne Gaas oo saxaafada la hadlayay, ayaa wax laga waydiiyay arinta aadka loo hadal hayo ee kordhinta baarlamaanka,isagoo ka jawaabayana waxuu yiri ”Anigu awood uma lihi in aan kordhiyo baarlamanka laakiin waxaan warqad codsiya udiray gudoomiyaha baarlamaanka sirna mahan,baarlamaanka iyo shacabka ayay utaal in ay diidaan ama aqbalaaan,balse waxaan filayaa in laga maarmi doono kordhintaas oo doorasho loo dareeri doono dadkuna codkooda ku ciil bixi doonaan”
Hadaba jawaabtan madaxweyne Gaas ayaa laga dhex arki karaa dhawr jawaabood oo kala ah:-
1.In Madaxweyne Gaas ka rajo xun yahay hirgalka codsigii uu baarlamaanka udiray ee kordhinta xildhibaanada.
2.In Madaxweyne Gaas uusan ku faraxsanayn hadalkii Camey ee ahaa doorasho ma hirgalin doono xiligan.
3.In Madaxweyne Gaas wali ku adkaysanayo in uu ka dhabaynayo balanqaadkiisii ahaa doorasho hal qof iyo hal cod ah 2019.
Dhanka kale waxaa xusid mudan in ay jirto nuxnux iyo xan hoose oo aan wali soo shaac bixin oo tilmaamaysa in madaxtooyada Puntland ka fakarayso in ay dalbato mudo kordhin gaaraysa hal ilaa labo sano si ay u dhamaystirto hawlaha dimuqraadiyanta ee qabyada ah.
Taageerayaasha madaxtooyada ayaa u arka wax daw ah in mudada loo kordhiyo madaxtooyada si ay u dhamaystiraan hawlahaas muhiimka ah.halka kuwa kasoo horjeeda u arkaan wakhti lumis iyo dib u dhac lagu samaynayo horusocodkii nidaamka dawliga ah ee Puntland.
Dadka dhexdhexaadka ah ee aan labada dhinac midna raacsanayn ayaa u arka in labo sano oo madaxtooyada loogu daro xiligeeda hogaaminta dalka ay lagama maarmaan tahay maanta si arimaha muhiimka ah ee taagan iyaguna ay gacanta ku hayaan loo dhamaystiro.
Isku soo wada bilaha soo socda ayaa la ogaan doonaa halka xaalku ku biyo shubto,iyadoo la ogsoon yahay in durba hada ay bilaabeen siyaasiyiinta reer Puntland u diyaar garawga olalaha doorashada 2019 ee madaxtooyada Puntland.
Hoos ka daawo muuqaalka madaxweynaha oo arintaas ka hadalaya.